स्वस्थ्य जीवनका लागि जरुरी पाँच कुरा | Chhatapost.com
Home मनोरन्जन स्वस्थ्य जीवनका लागि जरुरी पाँच कुरा
हरेक समय कामको पछि मात्रै दौडिएर आफ्नो स्वास्थ्यमा हेलचक्रयाईँ नगर्नुहोस् किनभने यसले तपाईंलाई बिरामी मात्रै बनाउँदैन । यसले तपाईंको कार्यक्षमतामा असर पनि पर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन बिहान बिहानै केही विशेष बानीहरुलाई अपनाएमा मात्रै पनि धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले स्वास्थ्य राम्रो त हुन्छ नै कार्यक्षमता पनि बढ्नेछ । जसले तपाईंको सपना पुरा गर्न पनि मद्धत गर्छ ।
१. दिनमा ८ घन्टा सुत्ने: खाना खाने र पानी पिउने जस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो सुत्ने । तर, काम धेरै गर्ने चक्करमा धेरै मानिसहरु पर्याप्त निन्द्रा लिँदैनन् जसको कारणले उनीहरुलाई कैयौं खालको स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरुको सामना गर्नुपर्छ । यदि पर्याप्त निदाउनुहुन्छ भने यसले तपाईलाई निम्नलिखित लाभ मिल्छ
२. ध्यान र प्रार्थना गर्ने: ध्यान र प्रार्थनाले मानिसको जीवनलाई सकरात्मकता तर्फ लैजान्छ । तपाईंजीवनमा जति धेरै सकरात्मक रहनुहुन्छ परिस्थिती पनि त्यति नै सकरात्मक हुन्छ । यसैले ध्यान र प्रार्थना जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि जरुरी छ ।
३. प्रतिदिन तीस ग्राम प्रोटिन सेवन गर्ने: तपाईंले दिनभरको आफ्नो खानामा लगभग ३० ग्राम प्रोटिनको सेवन अवश्य गर्नुपर्छ । प्रोटिनयुक्त खाना खानाले तपाईंको कार्यक्षमता बढ्छ र लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । साथै यसले ब्लड सुगरको स्तर पनि सन्तुलित राख्छ । जसले तपाईं छिटै थाक्नुहुन्न र आफ्नो काम सफलतापूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ ।
४.चिसो पानीले नुहाउने: चिसो पानीले नुहाउनाले मानिस शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन्छ । चिसो पानीले नुहाउनाले मुडफ्रेस बनाउने न्यूरो केमिकल्स निस्कन्छ जसले तपाईंलाई खुसी भएको महसुस गराउँछ । यसैले चिसो पानीको स्नानले कार्यक्षमतालाई बढाउनको लागि फाइदाकारी हुन्छ ।
५. अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने चीज: जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि आफैलाई हमेसा प्रोत्साहित गर्नुहोस् । यसैले यस्तो चीज पढन् पर्छ जसले तपाईंको जीवनमा सफल हुनको लागि प्रेरणा मिलोस । आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने लक्ष्य लिनुहोस । यसो गरेमा तपाईं सँधै आफ्नो कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रयास गरेर सफलता तर्फ अग्रसर हुनुुहन्छ ।
Previous articleएमसीसीविरुद्ध नेमकिपाको विरोध जुलुस (फोटो फिचर)
Next articleयस्ता लक्षण देखिए तत्कालै जाँच गराइहाल्नुहोस्, हुनसक्छ मिर्गौला खराबी
२४ घण्टामा ११ सय ८३ सङ्क्रमित, आठ हजार ७०४ निको, ११ को मृत्यु